हुवावेमाथिको अमेरिकी प्रतिबन्ध तीन महिना लम्बियो, अन्य ४६ कम्पनी प्रतिबन्धित « GDP Nepal
( Thursday, February 27, 2020)
हुवावेमाथिको अमेरिकी प्रतिबन्ध तीन महिना लम्बियो, अन्य ४६ कम्पनी प्रतिबन्धित
Published On : 22 August, 2019 7:45 am
बेइजिङ (एजेन्सी): अमेरिकाले चिनियाँ प्रविधि कम्पनी हुवावेमाथि लगाएको प्रतिबन्ध अरु तीन महिनाका लागि थप गरेको छ । यसअघि लगाइएको तीन महिना प्रतिबन्धको समय सकिएसँगै अर्को तीन महिना थप गरिएको हो ।
हुवावेलाई अमेरिकी सेवा र वस्तु बिक्री गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । अमेरिकी प्रशासनको यस्तो निर्णयप्रति हुवावेले अन्यायपूर्ण कदम भन्दै आपत्ति जनाएको छ । चीनका लागि गुप्तचरी गरेको भन्दै हुवावेलाई प्रविधि र अन्य सामान बिक्री गर्न अमेरिकी कम्पनीमाथि रोक लगाइएको छ ।
अमेरिकी वाणिज्य विभागले अमेरिकी कम्पनीमाथि हुवावेलाई सेवा र वस्तु खरिद बिक्रीमा रोक लगाएको यो दोस्रो पटक हो । पहिलो पटक लगाइएको तीनमहिने प्रतिबन्ध समाप्त भएलगत्तै तीन महिना थप गरिएको हो ।
वाणिज्य विभागले हुवावेसँग कारोबार गर्ने ४६ कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । हुवावेसँग कारोबार गर्ने १ सयभन्दा बढी कम्पनी छन् र अरूमाथि पनि यस्तै रोक लगाइने सम्भावना रहेको छ ।
अमेरिकी अधिकारीहरूले यसै वर्षको सुरुमा पहिलो पटक प्रतिबन्ध घोषणा गरेका थिए । हुवावेले चिनियाँ गुप्तचर निकायलाई गोप्य सूचना संकलन गरी उपलब्ध गराउने र त्यसबाट राष्ट्रिय सुरक्षामै खतरा उत्पन्न हुने अमेरिकी तर्क छ । तर, हुवावेले अमेरिकी तर्क हास्यास्पद भन्दै आफू विशुद्ध व्यावसायिक संस्था रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो अमेरिकी प्रतिबन्धका बारेमा विज्ञप्ति जारी गर्दै हुवावेले भनेको छ, “प्रस्टै छ कि यो निर्णय राजनीतिक प्रेरित छ र यसको राष्ट्रिय सुरक्षासँग कुनै सम्बन्ध नै छैन । अमेरिकी कदमले खुला बजार प्रतिस्पर्धाका आधारभूत सिद्धान्तलाई उल्लंघन गरेको छ ।”
हुवावेले अगाडि भनेको छ, “अमेरिकी प्रतिबन्ध कसैको हितमा छैन र यो अमेरिकी कम्पनीको पक्षमा पनि छैन । हुवावेको व्यवसायलाई दबाउने अमेरिकी प्रयत्नले अन्ततः अमेरिकालाई नै हानि गर्नेछ र प्रविधि क्षेत्रको अगुवा हुने अमेरिकी चाहनालाई ठेस पु¥याउनेछ ।”
सोमबारको अमेरिकी कदमपछि पनि हुवावेले अमेरिकामा निर्मित सेमिकन्डक्टर्स र स्मार्टफोन एवं नेटवर्क उपकरणमा आवश्यक अरू सामग्री खरिद गर्न सक्नेछ । अमेरिकी दूरसञ्चार कम्पनीहरूले हुवावेका नेटवर्किङ उपकरण किन्न सक्नेछन् ।
यसै महिनाको सुरुमा हुवावेले आफ्नै हार्मोनीओएस अपरेटिङ सिस्टम सार्वजनिक गरेको थियो । अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण गुगलको एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम हुवावेका स्मार्टफोन र अरू उपकरणमा प्रयोग गर्न नपाउने सम्भावना बढेपछि हुवावेले आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम प्रयोगमा ल्याउन थालेको हो ।
सेयर बजारमा आज के होला? जानकारहरु भन्छन्ः ८० अंकसम्म झर्न सक्छ !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी सचिवालय बैठकको निर्णयविपरीत मनोनित राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा डा.
चन्द्र ढकालद्वारा महासंघको २० औं अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी घोषणा !
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको २० औं अध्यक्षका लागि उद्यमी
अर्थमन्त्री हट्ने भन्दै सेयर बजारमा साना लगानीकर्ता डुबाउने खेल !
काठमाडौं । सेयर बजार संसारभर संवेदनशील हुन्छ अर्थात सानो घटनाको ठूलो प्रभाव रहन्छ । आर्थिक
निगममा रणनीतिक साझेदारको विकल्प छल्न सेयर बिक्रीको निर्णय !
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमको आइतबारको सञ्चालक समिति वैठकले २५ प्रतिशत सेयर
ललित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला चैत २६ गतेदेखि
ललितपुर । ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा बर्सेनि हुँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला यस वर्ष
चरिकोटमा महोत्सव र दोलखा लगानी सम्मेलन !
काठमाडौं । पूर्वी पहाडी जिल्ला दोलखामा महोत्सव र लगानी सम्मेलन एकसाथ हुने भएको छ ।
पार्वती थपलिया , प्रकाश भण्डारी , लक्ष्मी ढकाल
- डा दधि अधिकारी
Chabahil -7 Kathmandu
सूचना विभागमा दर्ता नं. :१२०७/2075/76 ...
©2020 GDP NepalGDP Nepal